२० वर्षअघि किन गराइयो एमआरआई मेसिनमा यौनसम्पर्क ? यस्तो छ अध्ययनको निष्कर्ष – Health Post Nepal
२० वर्षअघि किन गराइयो एमआरआई मेसिनमा यौनसम्पर्क ? यस्तो छ अध्ययनको निष्कर्ष
२०७६ पुष १६ गते १०:४७
तपाईंलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, तर यो सही हो कि वैज्ञानिकको एक टिमले मानिसलाई म्याग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिङ (एमआरआई) स्क्यानरभित्र यौनसम्पर्क गर्नका लागि भनेका थिए । यसको उद्देश्य सहवासका क्रममा पुरुष र महिलाको प्रजनन अंगहरूको तस्बिर लिन सम्भव छ वा छैन पत्ता लगाउनु थियो । २० वर्षअघि वैज्ञानिकले एमआरआई मेसिनभित्र सहवास गराएका थिए । अहिले ‘सहवास र महिला यौन उत्तेजनाका क्रममा पुरुष र महिला प्रजनन अंगहरूको म्याग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिङ’ शीर्षकको लेख मेडिकल जर्नल बिएमजेको सबैभन्दा बढी डाउनलोड गरिएको लेखमध्ये एक बनेको छ ।
यो सामान्य रिसर्चको पेपर यति धेरै पपुलर बनेको छ मानौँ यो चन्द्रमामा पाइला टेक्नुजस्तै प्रयोग हो । यद्यपि, यसको लोकप्रियता र यसमा मानिसको आकर्षणको एक कारण स्क्रिनमा निःशुल्क सहवास देखिने सम्भावनाका कारण पनि हुन सक्छ, देख्नमा ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटजस्तो प्रतीत नै किन नहोस् । डच वैज्ञानिकको टिमद्वारा गरिएको यस किसिमका प्रयोगमध्ये एकको उद्देश्य यो पत्ता लगाउनु थियो कि– सम्भोग र महिला यौन उत्तेजनाका क्रममा शरीरको रचनाबारे प्राचीन तथा वर्तमान विचार मान्यतामा आधारित छ वा तथ्यमा ।
अध्ययनको मुख्य निष्कर्ष १३ प्रयोगबाट निकालिएको थियो । यसमध्ये ८ दम्पति र ३ एकल महिलामा गराइएको ‘मेसिनरी पोजिसन’मा यौनसम्पर्कका क्रममा पत्ता लागेको छ– पुरुष यौनांग एक हँसियाजस्तो (बुमर्याङ आधारको) प्रतीत हुन्छ । अध्ययनमा यो पनि पाइएको छ कि, यौन उत्तेजनाको समयमा गर्भाशयको आकार बढ्दैन ।
१९९९ मा पहिलोपटक बिएमजेमा प्रकाशित भएको थियो अध्ययन
यो अध्ययन युनिभर्सिटी हस्पिटल ग्रोनिन्जेन एन्ड भियु एमस्टरड्याम युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरूले मिलेर गरेका थिए । २० वर्षअघि क्रिसमसका अवसरमा सन् १९९९ मा गरिएको यो डच अध्ययनलाई पहिलोपटक मेडिकल जर्नल बिएमजेमा प्रकाशित गरिएको थियो । त्यतिवेला कसैले पनि सोचेको थिएन कि यो प्रकाशन क्लिनिकल्ली र वैज्ञानिक हिसाबले उपयोगी हुन सक्छ । तर, यो बिएमजेको सबैभन्दा बढी डाउनलोड गरिएको आर्टिकलमध्ये एक बन्यो र यसलाई १३० अन्य वैज्ञानिक पेपरमा प्रयोग गरियो । २०१९ को अक्टोबरमा यसलाई ५० पटक एक्सेस गरियो ।